सबैको नजरमा रहेका शीर्ष ५ ओपनर जोडी ,जो विश्वकपमा तहल्का मच्चाउन तयार छन ! – onlinekhelkhabar.com
सबैको नजरमा रहेका शीर्ष ५ ओपनर जोडी ,जो विश्वकपमा तहल्का मच्चाउन तयार छन !
सनिश आजाद	Posted on ६ जेष्ठ २०७६
सनिश आजाद ( अनलाईन खेलखबर ) ।। विश्वको सबैभन्दा ठूलो क्रिकेट प्रतियोगिता अर्थात क्रिकेटको महाकुम्भमेला आइसीसी एकदिवसीय विश्वकपको मिति नजिकिदै गर्दा अहिले विश्व क्रिकेटमय बन्दै गएको छ।
मे ३० देखि जुलाई १४ सम्म ईङ्गल्याण्ड र वेल्समा हुन् गईरहेको आईसीसी एविश्वकपमा भाग लिने १० टिमले अहिले आफ्नो १५ सदस्यीय टोलीलाई घोषणा गरिसकेको अबस्था छ ।
जुन यस महिनाको मे २३ तारिख सम्म परिमार्जन गर्न सकिनेछ । विश्वकपको माहोल बन्दै गर्दा टिमको मुख्य जसले टिमलाई सुरुवाती अबस्थामा टिमको ईनिङ्गको बाटो तय गराउने ठोस भूमिका निर्बाह गर्दै अगाडि बढाउने मुख्य जिम्बेबारी निर्बाह गर्ने त्यी ओपनर ब्याट्सम्यानको बारेमा यसमा चर्चा गरिएको छ ।
खेलमा ओपनिङ्ग जोडीको भूमिका अहम रहेको हुन्छ । यदि ओपनिङ्ग जोडीले टिमका लागि सुरुवातमा राम्रो सुरुवात दिलाएको खण्डमा टिमका बाकि खेलाडीहरुलाई खुलेर खेल्ने बाताबरण सिर्जना हुने गर्छ ।
जुन क्रिकेट हरेक खेलमा अधिकाम्स देखिने गर्छ । टिमको सुरुवाती ओभरमा बलियो स्कोर बन्यो भने मध्यक्रमका ब्याट्सम्यानलाई रन बनाउन भार नपर्ने हुन्छ ।
खेलमा सदैभ ओपनिङ्ग जोडीको महत्वपुर्ण भूमिका रहने गर्छ । र यता यसपटकको १२ औँ सस्करणको यो विश्वकपमा उच्च स्कोर बन्ने अपेक्षा समेत गरिएको छ ।
ब्याटिङ्ग पिचमा यसपटक विश्वकपमा ब्याट्सम्यानलाई धेरै साथ पक्कै दिने देखिन्छ । र यस्तोमा ओपनिङ्ग ब्याट्सम्यानले कस्तो प्रदशन गर्लान त्यो त हेर्न बाकि रहेको छ तर हामीले यी ५ ओपनिङ्ग जोडीको बारेमा चर्चा गरेका छौ , जसले यसपटकको विश्वकपमा धेरै राम्रो गर्न सक्छन ।
हामीले मुख्य टोलीको सम्भावना युक्त ओपनर जोडीका बारेमा छलफल गर्नुको साथै, टोलीको ओपनर संयोजनको आधारमा मूल्याङ्कन गर्दै स्थान दिएका छौ।
खेलमा ओपनिङ्ग जोडीको भूमिका अहम रहेको हुन्छ । यदि ओपनिङ्ग जोडीले टिमका लागि सुरुवातमा राम्रो सुरुवात दिलाएको खण्डमा टिमका बाकि खेलाडीहरुलाई खुलेर खेल्ने बाताबरण सिर्जना हुने गर्छ । जुन क्रिकेट हरेक खेलमा अधिकाम्स देखिने गर्छ । टिमको सुरुवाती ओभरमा बलियो स्कोर बन्यो भने मध्यक्रमका ब्याट्सम्यानलाई रन बनाउन भार नपर्ने हुन्छ ।
खेलमा सदैभ ओपनिङ्ग जोडीको महत्वपुर्ण भूमिका रहने गर्छ । र यता यसपटकको १२ औँ सस्करणको यो विश्वकपमा उच्च स्कोर बन्ने अपेक्षा समेत गरिएको छ ।ब्याटिङ्ग पिचमा यसपटक विश्वकपमा ब्याट्सम्यानलाई धेरै साथ पक्कै दिने देखिन्छ । र यस्तोमा ओपनिङ्ग ब्याट्सम्यानले कस्तो प्रदशन गर्लान त्यो त हेर्न बाकि रहेको छ तर हामीले यी ५ ओपनिङ्ग जोडीको बारेमा चर्चा गरेका छौ , जसले यसपटकको विश्वकपमा धेरै राम्रो गर्न सक्छन ।
५. फखर जमान र इमाम-उल-हक ( पाकिस्तान )
फखर जमान र इमाम-उल-हकको जोडी २०१७ देखि छोटो अन्तरालमै सफल ओपनर ब्याट्सम्यान जोडिको रुपमा चिर-परिचित रहेका छन । करिब २ वर्ष को छोटो अन्तरालमा २४ पारि खेल्दै यस जोडीले १२६९ रन बनाएको छ ।
जसमा ४ सतक र १० अर्धसतक समेत सामिल रहेको छ । जोडीको औसत रन ५७ छ भने सर्वाधिक साझेदारी ३०४ रन रहेको छ । राम्रो ओपनिङ्ग जोडीको रुपमा पछिल्लो समय उदाएको यो जोडीको विश्व कपमा कस्तो प्रदशन रहने छ ।
त्यो हेर्न बाकि रहेको छ । यो जोडीबाट टिमले पनि ठुलो आश गरेको छ ।
सन् २०१७ अक्टोबर १८ तारिखमा श्रीलका बिरुद्दको खेलमा एकदिवसिय डेब्यु गरेका इमाम-उल-हकले अहिले सम्म २८ एकदिवसिय खेल खेलिसकेका छ्न ।
जसबाट ६ सतक र ५ अर्धसतकिय सहित कुल १३ सय ८७ रन बनाईसकेका छन ।
यस्तै फखर जमानको एकदिवसिय आकडा पनि उतिक्कै राम्रो रहेको छ ।उनले पनि ३६ खेलबाट १६४२ रन बनाएका छन । जसमा उनले एक डबल सतक सहित ४ सतक र १० अर्धसतक जोडिसकेका छन ।
४. हशिम आमला र क्विंटन डी कॉक ( दक्षिण अफ्रिका )
हशिम आमला र क्विंटन डी कॉकको जोडी दक्षिण अफ्रीकाको सबै भन्दा सफल ओपनर जोडीको रुपमा मानिने गरिन्छ । बायाँ हाते ब्याट्सम्यान डी कॉकले आक्रामक ब्याटिङ्ग गर्ने गर्छन । हशिम आमलाले स्थिर भूमिका निभाउनमा माहिर छन् । यी दुई बिचको तालमेल मैदानमा खास देखिन्छ ।
एक अर्का बिचमाथि पूर्ण भरोशा यी ब्याट्सम्यानलाई छ । जसको प्रतिफल ९ वर्ष देखि एकैसाथ खेलिरहेका छन जुन आफैमा एक मिशाल हो । यस सफल जोडीले एकदिवसिय करियरमा ८६ खेलबाट ४११६ रनको साझेदारी गरिसकेका छन । जसमा १० सतक र १५ अर्ध सतक सामेल रहेको छ ।
३. डेविड वार्नर र आरोन फिंच ( अस्ट्रेलिया )
डेविड वार्नर र आरोन फिंचको सलामी जोड़ी २०१८ सम्म ऑस्ट्रेलियाको लागि निकै विस्फोटक ओपनिङ्ग जोडी रहेको थियो ।
यसपटकको विश्वकपमा पनि अझ राम्रो प्रदर्शन गर्ने कोसिस गर्नेछन भन्नेमा कुनै दुई मत छैन। २०१४ देखि संगै ब्याटिङ्ग गर्दै आइरहेको यो जोडीले २१२६ रन बनाई सकेको छ ।
जसमा ५ सतक र १० अर्धसतक सामिल रहेको छ । यी दुई ब्याट्सम्यान बिच औसत स्कोर ४४.२९ भएता पनि डेविड वार्नर र आरोन फिंच बीचको हाल सम्मको उच्च साझेदारी २३१ रन रहेको छ ।
यता विश्वकपको दाबेदार समेत रहेको डिफ़ेण्डिङ्ग च्याम्पियन अष्ट्रेलिया विश्वकपको सबैभन्दा सफल टिम हो । अष्ट्रेलियाले अहिले सम्म ५ पटक बिजेता र २ पटक उप बिजेता भईसकेको छ ।
अष्ट्रेलियाले सन् १९९७ मा पहिलो पटक उपाधि उचालेको थियो । यसपछि १९९९ ,२००३ र २००७ मा अष्ट्रेलियाले लगातार ३ पटक उपाधि उचालेको थियो भने अघिल्लो २०१५ मा भएको विश्वकपमा अष्ट्रेलियाले न्युजिल्याड लाई फाईनलमा ७ विकेटले पराजित गर्दै बिश्वकपको उपाधि उचालेको थियो ।
यसपटक पनि अस्ट्रेलिया विश्वकपको प्रमुख दाबेदार मध्यको एक टिम हो । र जसमा निकै राम्रो लयमा रहेका यी दुई खेलाडीको भूमिका पनि निकै महत्वपुर्ण पक्कै रहने छ ।
२. रोहित शर्मा र शिखर धवन ( भारत)
भारतीय क्रिकेटमा सफल ओपनिङ्ग जोडीको रुपमा आफुलाई स्थापित गरिरहेका रोहित शर्मा र शिखर धवनको प्रदशन यसपटकको विश्वकपमा हेर्न लायक पक्कै हुनेछ ।
भारतीय टिमका भरपर्दा खेलाडीको साथ सन् २०१३ देखि चलिरहेको छ । यो जोडीले एकदिवसियमा १०१ खेल खेल्दै ४५४१ रन बनाईसकेको छ । जसमा १५ सतक र १३ अर्धसतक सामेल रहेको छ। ४५ रनको औसत साझेदारी रहेता पनि यस जोडीमा धेरै अनुभब र पूर्ण बिश्वासले भरिपुर्ण रहेको छ । विश्वकपको दाबेदारी प्रस्तुत गरेको भारत तेस्रो पटक उपाधि उचाल्ने रणनीतिमा रहेको छ ।
१. जेसन रॉय र जॉनी बेयरस्टो ( ईङल्यान्ड )
यसपटकको विश्वकप आयोजक ईङ्गल्याण्डलाई पनि विश्वकपको उपाधि उचाल्न सक्ने टिमको रुपमा हेरिएको छ । पूर्ण सन्तुलित देखिएको टिममा जेसन रॉय र जॉनी बेयरस्टोको ओपनिङ्ग साथ रहेको छ । यी दुई खेलाडीहरु उच्च लयमा पनि रहेका छन ।
जसको प्रतिफल अहिले इङ्गल्याण्डको सबैभन्दा सर्वश्रेष्ठ ओपनर ब्याटिङ गर्दै आएको देखिन्छ। यस जोडीको बिशेषता भनेको हवाई सट साथै स्थिर ब्याटिङ्ग रहेको छ । साथमा ब्याटिङ्ग गर्दै उनीहरुले २६ खेलबाट १७७५ रन बनाएका छन जसमा ६४.४२ रनको औसत स्कोर रहेको छ । विश्वकपमा अभागी टिमका रुपमा चिन्निने इंगल्याण्डका लागी यसपटक ट्रफी घरमै राख्ने सुनौलो मौका समेत रहेको छ ।
Previous Postविश्वकप बिराट कोहलीका लागी असली परीक्षा : टिम तेस्रो पटक उपाधि उचाल्न लालाहित
Next Postरङ्गशाला निर्माणको सहयोगार्थ चितवनमा क्रीकेट समर्थकहरुबाट रचनात्मक अभियान चलाउदैँ